Kenya waxay diyaar u tahay inay noqoto goobta cusub ee Golaha Guud ee UNWTO 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Kenya waxay diyaar u tahay inay noqoto goobta cusub ee Golaha Guud ee UNWTO 2021
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Kenya • News • Dadka • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Kenya waxay dejinaysaa isbeddel cusub iyo hoggaan dhinaca dalxiiska caalamiga ah ee ka soo kabanaya COVID.
Mudane. Najib Balala hal daqiiqo kuma lumin markii uu ku casuumay Dalxiiska Adduunka in uu qabto shirka Golaha Guud ee UNWTO ee dhawaan lagu qabanayo Kenya.
Hadda waxay ku xiran tahay Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili inuu yiraahdo haa dib u dhac la'aan.
UNWTO waxay sugaysay ilaa sabtida si ay xubnaha ugu wargaliso. Golaha Guud ee soo socda ayaa laga soo wareejiyay Morocco oo loo wareejiyay Spain.
Maalintii Axada ee Hon. Najib Balala, Xoghayaha Dalxiiska ee Kenya ayaa ku casuumay Hay’adda Dalxiiska Adduunka ee UNWTO iyo xubnaheeda inay shirkooda guud ee dhowaan ka furmi doonaan dalka Kenya.
Morocco waxay ahayd goobtii asalka ahayd oo hadda la joojiyay usbuucii hore walaaca COVID.
Kenya waligeed waxa ay ahayd hogaamiyaha dalxiiska ee Afrika, iyo wixii ka dambeeya marka ay timaaddo dejinta laxanka iyo isbeddellada qaaradda iyo kuwa kale.
Sabtidii ayuu mudane. Najib Balala, Xoghayaha Dalxiiska ee dalkan Bariga Afrika ayaa waxaa la socodsiiyay UNWTO Shirweynihii guud ee UNWTO ee muddada dheer la sugayay ayaa lagu kansalay Morocco sababo la xidhiidha badbaadada COVID waxaana loo guuray Spain, xarunta dhexe ee ururka.
Markii UNWTO Sekretariat ay la soo baxday la yaab usbuucan usbuucan, WhatsApp waxay noqotay goob mashquul ah oo ay ku wada xiriiraan wasiirrada dalxiiska iyo hoggaamiyeyaasha dalxiiska.
Lobby taageereyaal ayaa la isugu geeyey duullimaad. Ma aysan qaadan wax qancin ah in Najib Balala, oo ah xoghayihii dalxiiska ee Kenya uu muddo dheer soo maamulayay dhibaatadan.
Markii Marooko loo doortay in uu ka dhaco shirka guud ee UNWTO ee St. Petersburg, Ruushka waxa ay la tartamaysay Kenya iyo Filibiin.
Halyeyga Dalxiiska Adduunka Najiib Balala ayaa diyaar u ah inuu Kenya ku soo dhaweeyo wufuudda Shirweynaha 24-aad ee Dalxiiska Adduunka ee Kenya inta u dhaxaysa Noofambar 30 ilaa December 3, 2021
Axaddii habeenimo, ayuu yidhi wasiir Balala oo hurdo la’aan ah eTurboNews"Hadda waxaan qoray warqadda aan ku casumaynayo UNWTO in lagu qabto shirka 24-aad ee golaha loo dhan yahay ee Magical Kenya."
Daqiiqadii ay tani samaysay wareegyada, tallaabadan ayaa laga mahad celiyay adduunka oo dhan.
Cuthbert Ncube, oo ah guddoomiyaha guddiga dalxiiska Afrika ayaa ka faallooday arrintan, waana tii labaad ee uu ku tago magaalada Johannesburg, isagoo ku sugan diyaarad ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines, kaddib safar uu dhawaan ku tagay dalka Itoobiya.
"The Aguddiga dalxiiska ee frican si buuxda ayuu u taageersan yahay tallaabadan qalbi-buuxa.
Mudane. Najiib Balala waa saaxiib wanaagsan oo ATB ah, waana hogaamiye dalxiis oo aan muran ka taagnayn Afrika iyo meelo kale. Waxaan jecelahay inaan Mudane Balala ugu hambalyeeyo aragtidiisa, waxaana kula dardaarmayaa mudane. Xoghayaha UNWTO Zurab Pololikashvili si uu u taageero codsigan deeqsinimada leh, si Kenya, Afrika inteeda kale, iyo adduunkuba ay isaga kaashadaan sidii ay kal-fadhiga 24-aad ee Golaha Guud ee UNWTO uga dhigi lahaayeen shirarkii ugu fiicnaa abid. Waxaa hubaal ah inay muhiimad weyn u leedahay mustaqbalka dalxiiska. Dhammaanteen waxaan u baahanahay hoggaan oo aan ku heshiinno sidii aan uga bixi lahayn dhibaatadan oo aan uga soo kaban lahayn qaybta."
The Shabakada Dalxiiska Adduunka Wakiilo ka socda hay'adaha dalxiiska ee in ka badan 128 wadan ayaa si weyn u taageersan martigelinta Kenya ee Golaha Guud ee Dalxiiska Adduunka ee Qaramada Midoobay.
Dr. Peter Tarlow, oo ah madaxa Shabakadda Dalxiiska Adduunka, ayaa xusay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado dalxiiska iyo guud ahaan caalamka, wuxuuna caddeeyay in martigelinta Kenya ee shirweynaha ballaaran ee noocan oo kale ah uu muujinayo marxalad cusub oo wax soo saar leh oo ah dalxiiska adduunka.
Sida urur caalami ah, waxaa lagama maarmaan ah in shirarka dalxiiska lagu qabto adduunka oo dhan iyo martigelinta caynkaas ah waxay iftiimin doontaa Qaaradda Afrika, gaar ahaan Bariga Afrika, waxayna siin doontaa dardar dheeraad ah horumarinta dhaqaalaha iyada oo loo marayo dalxiiska Afrika oo dhan.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay si xooggan u taageertaa fikradda ah in waddamada adduunku ay helaan fursado siman oo ay ku martigeliyaan shirarka waaweyn. Habkan caalamiga ah wuxuu u tarjumaa fikradaha Qaramada Midoobay inay noqdaan xaqiiqooyin shaqeynaya.
Markii Morocco ay qaadatay go'aanka Oktoobar 15 si ay u joojiso munaasabadda, UNWTO waxay si sax ah u ogeysiisay xubnaha 3 maalmood gudahood Oktoobar 18 ku saabsan in Golaha Guud uu ka dhici doono Madrid, xarunta UNWTO.
Dalabka deeqsinimada leh ee Kenya, waxay sharaf u noqon doontaa dadaalka Morocco ay galisay dhacdadan waxayna u oggolaan doontaa in Golaha Guud uu sii joogo Afrika sidii loogu talagalay.
Waa in la ogaadaa, in Golaha Fulinta uu dhigay codka GA shirkii ugu dambeeyay ee Madrid. Goobta labadan dhacdo weligeed isku magaalo may ahayn.
Dadweynaha ayaa hadda isha ku haya in hoggaanka UNWTO uu ku ansixiyo codsiga Kenya dib u dhac la’aan.